Izikhiye zokukhetha ikhava yeduvet | Bezzia
Izinkinobho zokukhetha i-duvet
UMaria vazquez | 14/09/2021 12:00 | Ikhaya
Ngabe uNordic wakho omdala usevele ushayile okokugcina futhi akusafanele yini ukumthumela elondolo futhi? Ngabe unekamelo elisha futhi ufuna ukufaka indawo yokulala yakho ngokugcwalisa kweNordic? Uma ungakaze ubhekane ne- ukuthenga i-duvet, uzodinga okhiye abathile ukuze wazi ukuthi ungayikhetha kanjani efaneleke kakhulu.
Kunamathuba amaningi anhlobonhlobo uma kukhulunywa ngokuthenga iNordic. Ukwazi kanjani-ke, iyiphi inketho engcono kakhulu? E-Bezzia namuhla sizama ukukuqondisa kule nqubo yokuthenga, sinemininingwane yokuthi kufanele ubheke ini, yini okufanele ukukhumbule ukuthenga kahle.
1 Ukugcwaliswa kwemvelo noma okwenziwe?
1.1 Ukugcwaliswa kwemvelo
1.2 Izigcwalisi zokwenziwa
3 Uhlelo lolimi
Ukugcwaliswa kwemvelo noma okwenziwe?
Izinto zokugcwalisa ziyisici esinqumayo se- kuzuzwe amandla afanele okuvikela. Kukhona okugcwalisa okungokwemvelo nokugcwaliswa kokwenziwa kwemicu ejwayelekile, ye-polyester fibers engenalutho noma yama-microfibers. Ukwazi ubuhle nobubi bento ngayinye kuzokusiza wenze isinqumo sakho sokuqala.
Uma sikhuluma ngokugcwaliswa kwemvelo sikhuluma ngezimpaphe noma phansi. Ukugcwaliswa kwezimpaphe Kubandakanya umoba obenza bube nzima, bungathandeki kangako ekuthinteni futhi ubanikeze amandla aphansi okuvikela ukushisa uma kuqhathaniswa naphansi.
Ukufakwa phansi zilula futhi zinezimfanelo ezinhle kakhulu zokuvikela ukushisa. Lapho kusetshenziswa kakhulu phansi ukugcwaliswa, amanani amakhulu amakamelo omoya ayakhiwa, azovumela ukusakazwa okungcono futhi ngaleyo ndlela kube nokusatshalaliswa okungcono kokushisa nokuhwamuka okushesha komswakama.
Ukwazi uhlobo lwe-down esetshenzisiwe kumele siqondiswe yi-a isilinganiso esivamile esaziwa ngokuthi Gcwalisa Amandla. Lokhu kukhombisa ivolumu ehlala ku-28,35 g. phansi ngaphansi kwezimo ezijwayelekile. Kuyindlela, ngakho-ke, yokukala ikhwalithi yayo. Ukugcwaliswa okuhle kwe-Nordic emakethe kuvame ukuba seduzane nokugcwalisa Amandla we-9 noma i-10, esikalini se-10.
Izinzuzo zokuvikela ukugcwaliswa phansi kwemvelo zisobala, yingakho ukukhetha okubiza kakhulu emakethe. Okunye kepha kungasidikibalisa ekubhejeni kulolu hlobo lokugcwalisa: iqiniso lokuthi kuzofanele sikwenze iya kumshini wokuhlanza owomile ukuze uwahlanze.
Zingenziwa ngemicu evamile, imicu ye-polyester engenalutho noma ama-microfibers. Konke okuphefumula, ukuvimbela ukwanda kwesikhunta futhi kune-hypoallergenic. Ukugcwaliswa kweMicrofiber yikhona okulingisa kangcono imvelo phansi, kokubili ngevolumu namandla okuvikela. Kodwa-ke, kufanele wazi ukuthi ngokushisa okufanayo nokusebenza kokushisa okushisayo, ukugcwaliswa okwenziwe ngaso sonke isikhathi kuzoba nzima ukwedlula okuphansi.
Phakathi kwezinzuzo ezinkulu zokugcwaliswa kokuzenzakalela kukhona intengo yayo, ishibhile ukwedlula lokho kwama-duvet aphansi. Enye yezinzuzo zayo kulula ukugeza; ngaleyo ndlela iba inketho ethandwa kakhulu emakamelweni ezingane kanye / noma emakhaya wesibili.
Ukwakhiwa kwamagumbi omoya ngaphakathi kweduvet kuyisihluthulelo sokwenza ngcono amandla awo okuvikela ukushisa. Ukuthi ukugcwaliswa kusatshalaliswa ngokulingana yonke indawo yeduvet kuyisihluthulelo kumkhiqizo wekhwalithi. Ukwakhiwa kwamaphethini wedayimane okuqinisa kahle kuzohlangabezana kahle nale njongo. I-duvet eyenziwe ngo-100% kakotini, evumela ukuthi ukugcwaliswa kuphefumule, ngokwakhiwa okuqinile, okwakhiwe ngedayimane, ngakho-ke kuyisinqumo esingcono kakhulu.
"Isisindo ngo-gramu wephepha ngemitha eyisikwele" Le yindlela i-RAE echaza ngayo uhlelo lolimi, igama elisebenza njengesilinganiso se amandla okushisa we-duvet. Ukuphakama kohlelo lolimi, kuphakamisa ukushisa. Ukukhetha okufanelekile kunabo bonke, kuzodingeka ukuthi kubhekwe kokubili ukushisa kwamagumbi ethu kanye nokushisa komzimba.
Noma nini lapho sikhuluma ngendlu evuthayo lapho izinga lokushisa lingehli ngaphansi kuka-180ºC, a uhlelo lolimi oluzungeze u-200g / m2 kunganela ukubhekelela izidingo zethu. Ezindaweni ezibandayo kakhulu lapho ingeqi ku-15ºC, kepha kungadingeka i-duvet enesisindo esifinyelela ku-400g / m2.
Ngabe manje ucace kakhudlwana ngezinkomba okufanele ubheke kuzo ukuthola i-duvet efaneleke kakhulu?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Izinkinobho zokukhetha i-duvet
Izimfihlo Zomshado: Uchungechunge lwe-HBO Okufanele Uyibone
Amakhukhi anoshokoledi omnyama, amnandi!